युगसम्बाद साप्ताहिक - अर्थतन्त्रको उल्टो गति !
Monday, 03.30.2020, 03:08pm (GMT+5.5) Home Contact
देशको अर्थतन्त्र वाञ्छित सुधारोन्मुख गतिमा छ कि अझै ओरालो लग्ने क्रममा छ भन्ने कुरा अहिले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । आर्थिक प्रगतिका लागि मुलुकमा शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जित हुनुपर्छ र राजनीतिक स्थिरता पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । राष्ट्रिय समृद्धिको मूल आधार भनेको यथार्थपरक र वस्तुवादी स्थिर आर्थिक नीतिको अबलम्वन र कार्यान्वयनमा इमान्दारिता रहनु नै हो । राजनीतिक खपतका लागि लोकप्रिय नारा लगाउने र निर्वाचनका बेला आकर्षक घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेर जनताबीच भ्रम फैलाएर मताकर्षण गर्ने असङ्गत अभ्यास अनि राजनीतिक प्रभाव र दवावमा योजनाहरू तर्जुमा गर्ने अवस्तुवादी एवं तदर्थवादी प्रवृत्तिका दुष्परिणामहरू राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाधक बन्दैआएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले सुधारोन्मुख वाञ्छित गति लिन नसकेको कटु यथार्थ हो । मुलुकमा शान्ति बहाली छ र राजनीतिक स्थिरता पनि कायम भएको छ । तर पनि देशको अर्थतन्त्रले अझै वाञ्छित सुधारको बाटो किन समात्नसकेन र घोषित लक्ष प्राप्तिमा किन व्यवधान खडा भैरहेको छ भन्नेतिर समीक्षात्मक धारणा राखेर उत्पन्न व्यवधान हटाउँदै जाने र नीतिगत सुधारतिर प्रतिबद्ध अग्रसरता देखाउनेतिर भन्दा सरकार जुन बाटोमा हिँडिरहेको छ त्यो नै ठीक छ र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतिर डो¥याउँदै उपलब्धिहरू हाँसिल हुँदैै रहेका छन् भन्ने धिङ्धिङे सत्ता मानसिकता विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि समान रूपमा प्रदर्शित भैरहेको देखिनु गम्भीर बहसको विषय छ ।
मुलुकमा लोकप्रिय जनमत आर्जन गरेको दुई तिहाई बहुमतको स्थिर सरकार स्थापित भएपछि देशको अर्थतन्त्रले नीतिगत प्रष्टता र कार्यान्वयनमा दृढताकासाथ सुधारोन्मुख गतिलिन्छ भन्ने जुन आशा पलाएको थियो त्यो समयक्रममा भरोशापूर्ण बन्नुको सट्टा टुट्दैगएको अवस्था सिर्जित भैरहेको पुष्टि आर्थिक सूचकांकहरूले नै गरिरहेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो, यसमा अझै संशोधन गरिएको छैन । उता विश्व बैंकले हालै जारी गरेको ‘नेपालको विकास आवधिक’ प्रतिवेदनले समेत आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुने किटान गरेको छ । स्वतन्त्र आर्थिक विश्लेषकहरूले त देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा ओरालो लागिरहेको आँकडा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय समृद्धिको सपना बाँढेर मात्र हुँदैन राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने विकास गतिविधिमा तीब्रता आउनु अनिवार्य छ तर राष्ट्र्रिय गौरवका भनी घोषित अधिकांश आयोजनाहरूदेखि लिएर विकास आयोजनाहरूमा चरम शिथिलता व्याप्त छ, सरकारको खर्चगर्ने क्षमतामा कुनै वृद्धि छैन । बजेटले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्ने क्षमता नबढेकाले बजारमा तरलताको अभाव एकातिर विस्तारित छ भने अर्कातिर आयातमा कमी र निर्यातमा केही सुधारको आँकडा देखाउनखोजिए पनि यथार्थमा व्यापारघाटाको समस्या निराकरणको उपाय नै अबलम्वित छैन ।
भनिन्छ– आर्थिक वृद्धिदर २०१७ मा ८.२ प्रतिशत थियो, त्यो २०१८ मा ६.७ मा झ¥यो । २०१९ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.१ हुने प्रक्षेपण थियो तर २०२० मा ६.४ मा संकुचि हुने विश्व बैंकको पछिल्लो कथन छ । मुद्रास्फिति दर बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तघाटा बढ्दैगएको छ, राजस्व सङ्कलन बजेट वक्तव्यमा भनेभन्दा १८.३ प्रतिशत कम देखिएको छ । पूँजितगत खर्च पनि अघिल्लो वर्षभन्दा कमै हुने देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर मनसुन र सेवाक्षेत्रमा निर्भर रहेको विश्व बैंककै भनाइ छ । विद्युत आपूर्ति बढेको भए पनि औद्योगिक उत्पादन बढेको छैन । सरकारले चालू खाता तुलनात्मक रूपले राम्रो भएको दावी गरे पनि आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त रणनीति बन्न नसकेको खुलस्त छ । आन्तरिक र वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा बढेको छैन । पूँजी विकासमा धक्का लागेको छ । सरकारी खर्चमा बेरूजू हरेक वर्ष बढिरहेको छ । राज्य ढुकुटीको दुरूपयोग रोकिएको छैन । विश्वका भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १२४ स्थानमा दरिएको छ । सराकारले एक वर्षमा पाँचलाख राजगारी सिर्जना गर्ने गुड्डी हाँके पनि त्यसको कुनै आधार छैन । मूल्यवृद्धि सीमातीत छ । बजेटमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू परिणामहीन र अर्थहीन बनेका छन् । आयात प्रतिस्थापन हुने गरी कृषि उत्पादन बढाउने परिणामदायी कामको थालनी नै भएको छैन । आर्थिक भ्रष्टाचार विस्तारका अनेक प्रकरण उजागर भैरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बोली नवर्षने मेघको गर्जन जस्तै भएको छ । कुरा धेरै भए काम भने भएनन् । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएन । यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय समृद्धिको बाटो कसरी तय होला ? यो अहं प्रश्न खडा भएको छ ।